Pyae Phyo (MMiTD): ✿ Xiaomi Device တွေအတွက် XIAOMI TWRP FLASHER ✿
My Labels-2 My Labels-2a
My Labels-3 My Labels-3a
နည်းပညာဂျာနယ် Internet Journal
Mobile Guide Digital Life Net Guide နည်းပညာစာအုပ်များ
✿ Xiaomi Device တွေအတွက် XIAOMI TWRP FLASHER ✿
Xiaomi Device တွေအတွက် TWRP Recovery အလွယ်ဆုံး
ပြုလုပ်နိုင်မယ့် XIAOMI TWRP FLASHER လေးပါ။
Xiaomi Mi MaxXiaomi Mi 5/ProXiaomi Mi 4SXiaomi Mi Note/ProXiaomi Mi 4Xiaomi Redmi 3/3sXiaomi Redmi Note3ProXiaomi Redmi Note3(MTK)Xiaomi Redmi Note 2Xiaomi Mi 4iXiaomi Redmi Note PrimeXiaomi Mi 4cXiaomi Mi Pad 2Xiaomi Mi PadXiaomi Mi 3
Download HERE (www.linmss.org) မှတစ်ဆင့်
( ::::: ပိုစ့်တင်သူ-ချမ်းမြေ့မောင် ::::: )
My Facebook Wall- ( နှိပ်လိုက်ပါ)
==================== ကျွန်တော့်ရဲ့ Facebook ပေါ်ကနည်းပညာ Page လေးသို့လည်း *LIKE လုပ်ပြီး Update နည်းပညာများဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ... အဆင်မပြေမှုတစ်စုံတရာ နားလည်မှုမရှိမရှိခဲ့ပါက...
ကျွန်တော် ချမ်းလေးရဲ့...မှားယွင်းမှုပါခင်ဗျာ...။ ကျွန်တော်ရဲ့ Page လေးမှာ Post လေးတွေများ ၀င်ရောက်လက်တွဲပြီး နည်းပညာပိုစ့်များရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။ အကယ်၍ ကျွန်တော်ကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်က Mail သို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ...။
ချမ်းလေး ( MCMM )
✿ ဝင်းဒိုးတင်ပြီတိုင်းမှာ အင်စတော့ ပြုလုပ်ရမည့် -P...
✿ Internet Download Manager 6.26 Build 8 Patch+ Fu...
✿ Photoshop Cs5 Portable Full [123MB] ✿
✿ Adobe After Effects CS6 Portable Full [331 MB] ✿...
♪ Sony က ပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ် ♫
♪ LG က မိုဘိုင်းဖုန်းများကို ဈေးလျှော့ရောင်း ♫
✿ အသစ်ထွက်လာတဲ့ PES 2017 Pro evolution soccer Apk ...
✿ PES CLUB MANAGER v1.3.7 Apk + OBB [Andriod Game]...
✿ တစ်ခြား Browser တွေထက် Speed UP %100% ပိုမြန်တဲ့...
✿ DriverPack Solution 17.7.4.10 Offline Installer ...
✿ Java SE Runtime Environment v8.0 Update 112 +[32...
♪ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှ ဒေတာများကို ကလေးများ ဖျက်ဆီးခြင်...
♪ သင် အသုံးမပြုတဲ့ Facebook ရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ စွမ်းေ...
♪ ၂၇ရက်နေ့မှာ MacBook အသစ်ကို ထုတ်ဖော်ဖို့အတွက် အတ...
♪ Plants vs. Zombies ရဲ့ အသစ်စက်စက် Update Plants ...
♪ သင့်ရဲ့ iPhone မှာ ကီးဘုတ်ကို လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့သံ...
♪ ပထမဆုံး RAM 6GB ပါဝင်တဲ့ R9s Plus နဲ့ R9s ဖုန်းမ...
♪ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Le Pro3စမတ်ဖုန်းနဲ့ အမေရိကန...
♪ Google Play Store ပေါ်က အသုံးအဝင်ဆုံး Android App...
ဈေးနူန်းချိူသာ အာမခံချက်ပြည့် အရည်အသွေးကောင်းပြီး...
♪ Android ဖုန်းများတွင် Google Play Store နှင့် Gm...
♪ Wifi သုံးလို့ရတဲ့ computer ပေါ်ကနေ wifi ပြန်လွှင့်...
♪ စက်ရုပ်တွေနဲ့လက်ဝှေ့ထိုးမယ့် - Real Steel HD v1....
♪ NetGuide Journal Vol (4), Issue (57) (19.10.16) ...
♪ " Galaxy Note7အား Galaxy S7 Edge ဖြင့် လဲလှယ်န...
♪ " Acer Aspire Switch Alpha 12 " Price - USD 780...
♪ “Meizu M3 Note” ♫
♪ Live Video လွှင့်မယ့်အချိန်ကို ကြိုတင်အသိပေးထားနိ...
♪ USB ပေါက်မပါဝင်နိုင်တော့မယ့် Mac အသစ်တွေကို Appl...
မိမိမှ မူရင်းထွက်ပေါ်လာသော အသံကို အသံ Effects ပြောင...
♪ အသင်းမှာ Manager လုပ်ပြီးကစားချင်သူများအတွက် - P...
♪ Facebook Messenger မှာ ​လျှို့ဝှက်​မက်​​ဆေ့ခ်ျ​ ...
♪ “ရောင်း၊၀ယ်နိုင်သော Facebook ဈေးရုံ” ♫
♪ စမတ်ဖုန်းမှာ မိသားစု ဓါတ်ပုံ Album များလုပ်မယ် ♫...
♪ Honor 6x ဖုန်းအတွက် Pre Order တွေကို စတင်မှာယူခွ...
♪ ၁၉၉ ဒေါ်လာတန် Chromebook အသစ်ကို Acer မိတ်ဆက် ♫
♪ ဘက်ထရီပမာဏ 4900 mAh အထိ ပါဝင်မယ့် တန်ဖိုးနည်းစမတ...
♪ သင့် Timeline မှ Public Posts များကို Friends မျ...
♪ ကွေးညွတ်နိုင်တဲ့ Touchscreen ဖုန်းတွေကို Xiaomi ...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-75 (17.10.16) ♫...
♪ Samsung ဖုန်းများအတွက် version 5.xxx & 6.xxx Mya...
ကျွန်ုပ်နှင့် ဝါးရုံပင်သရဲ(ဆွေမင်း - ဓနုဖြူ)
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် updater Version 98.0.0...
♪ MPT , Telenor , Ooredoo ဆင်းကဒ်အားလုံးကို မှတ်ပံ...
♪ သင့်​ရဲ့ ကွန်​ပျူတာမှာ C:\_ က default drive ဖြစ်​...
♪ Gunship Strike 3D game ♫
♪ LG ရဲ့ လှပတဲ့ နည်းပညာမြင့်စမတ်ဖုန်း - " LG G Fle...
♪ " MPT Sim Card များကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် မှတ်ပုံ...
♪ “Lenovo K4 Note” ♫
ဒီဇင်ဘာတွင် ကျင်းပမည့် Telenor လူငယ်ဖိုရမ် မြန်မာပ...
Mac အသစ်များကို အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် မိတ်ဆက်ရန် A...
ကျောဘက်တွင် ကင်မရာနှစ်ခုပါဝင်သည့် Honor 6X ကို Hua...
♪ “Online page တွေအသုံးပြုပြီး စီးပွားရှာရအောင်” ♫...
♪ ဓါတ်ပုံတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးပြုပြင်နိုင်တဲ့ - ...
နယ်သမားများအတွက် အထူး Handset ပရိုမိုးရှင်း(19.10....
♪ Sony Xperia XZ ရဲ့ စိတ်ကျေနပ်စရာ အချက် (၅) ချက် ...
♪ Play Store က မဟုတ်တဲ့ Android apps တွေကို အလွယ်က...
စွန်ဇူး၏သေနင်္ဂဗျူဟာ အတတ်ပညာ - ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)
♪ " Windows အထောက်အကူပြု အခမဲ့ Software " ဆောင်းပ...
♪ Huawei Nova ကို ဒေါ်လာ ၃၁၀ ဖြင့် စတင်ရောင်းချ ♫
♪ အပါးလွှာဆုံးလက်တော့ပ်ဖြစ်သည့် Acer Swift7ကို အေ...
ဈေးနူန်းချိူသာပြီး အာမခံအပြည့်ဖြင့်ဝင်လာသော Maxxc...
MPT ၏ 4G ဝန်ဆောင်မှု စတင် အသုံးပြုနိုင်
♪ Galaxy Tab A ကို စတင် မိတ်ဆက် ♫
♪ ဈေးနှုန်းနဲ့မလိုက်ဖက်လောက်အောင်ကို မြင့်မားတဲ့ ...
♪ HIV ရောဂါအား အမြစ်ပြတ် ကုသနိုင်ပြီ ♫
♪ ရုရှားကို အဓိကဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်သ...
♪ အင်တာနက်ဒေတာအသုံးပြုမှု ချွေတာပေးတဲ့ Data Saver ...
♪ “Samsung Galaxy A8 (2016)” ♫
♪ MPT , Telenor , Ooredoo ဆင်းကဒ်အားလုံးကို မှတ်ပုံတင်ပေးမယ့် Application - All Sim Register apk ♫
ကျတော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Operator သုံးခုလုံးဖြစ်တဲ့ MPT , Ooredoo , Telenor Sim card များကို Online ကနေမှတ်ပုံတင်နိုင်မဲ့ application ...
Big Bag နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုဆောင်းထားသမျှ အားလုံးကို တင်ပေးလိုက်ပြီ ကြိုက်သလို share နိုင်ပါတယ်။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းတွေကို တစ်ပုဒ်...
Google ရဲ့ အဓိက အားစိုက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ Wi-Fi ကို အိန္ဒိယရဲ့ ရထားဘူတာတွေမှာ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို Go...
♪ MPT SIM Card များ Online ကနေမှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီ ♫
MPT SIM Card များကို onlone ကနေမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့လင့်ကနေဝင်ရောက်ပြီး information များကိုဖြည့်စွက်ကာမှတ်ပုံတင...
✿ Viber တွင် အခြားသူ၏ မက်ဆေ့အားဖတ်နိုင်မည့် နည်းလမ်း ✿
ပထမအဆင့် မှာတော့ အခြားသူရဲ့ ဖုန်းကိုယူပြီး သူမသိအောင်တော့လုပ်ရမှာပါ။ ဒုတိယအဆင့်မှာ သင့်ဖုန်းထဲကနေကြည့်နိုင်ပါပြီ။ ဒီစနစ်ကတော့ E...
Design By Pyae Phyo (MMiTD). Template images by konradlew. Powered by Blogger.